Shabakad lagu qabtay Garoonka Aadan-Cadde & Xildhibaan ku lug yeeshay!! – War La Helaa Talo La Helaa
By madoobe	 Last updated Oct 11, 2018
Ciidamada ammaanka garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aadan Cadde ayaa gacanta ku dhigay koox ka shaqeysa lacag dhaqidda.
War qoraal ah oo kasoo baxay hay’adda NISA oo lasoo dhigay barta Twitterka hay’adda ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka garoonka Muqdisho ay qabteen Shabakad ka shaqeysa lacag dhaqidda iyo sameynta doollar been abuur ah.
Shabakadda lacagta dhaqda ayaa laga qabtay laba ruux halka kuwo kalana lagu daba jiro, sida lagu sheegay warka kasoo baxay NISA.
“Ciidamada amaanka garoonka Adan Cade ee Muqdisho, waxay gacanta ku dhigeen shabakad ka shaqaysa fal-danbiyeedka lacag dhiqida iyo samaynta Dollar been abuur ah, waxaana gacanta lagu hayaa laba kamid ah shabakadaas, kuwa kalana waa lagu dabajiraa,”.
Hay’adda Nabadsugidda ayaa sheegtay in shabakaddaas uu howlaha u sahlay mudane ka tirsan baarlamaanka Somalia,waxana galka baarista ee shabakadda loo gudbiyay hay’adaha sharciga.
“Waxaa hawlaha u sahlay, sida gudbinta garoonka, “”Mudane ka tirsan golaha shacabka”” Ee BF. Galka baarista ee shabakadan waxaa loo gudbinayaa hay’adaha sharciga ee ku shaqada leh, si’ay uga qaadaan talaabada ku haboon,”.
Weerar xalay ka dhacay magaalada Baydhabo